မန္တလေး ဘီယာစက်ရုံကို တပ်မတော်က ငှားရမ်းတဲ့အထဲမှာပါဝင်တဲ့ မြေတွေကို ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပေးဖို့ မန္တလေးမြို့၊ ပုသိမ်ကြီးမြိ့နယ်၊ စည်သာယာရွာက တောင်သူတွေ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြခဲ့စဉ်
Photo : khaymani win/RFA
မန္တလေး ဘီယာစက်ရုံ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် တပ်မတော်က ငှားရမ်းလိုက်တဲ့ အထဲမှာပါဝင်တဲ့ မြေဧက ၈၀ ကျော်ကို ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပေးဖို့ မန္တလေးမြို့၊ ပုသိမ်ကြီးမြိ့နယ်၊ စည်သာယာရွာက တောင်သူ ၁၀၀ ခန့်က ဒီနေ့ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
အမှတ်( ၉၁၀) စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်း အနီးမှာရှိတဲ့ စည်ပိုင်းကုန်းကျေးရွာကို တပ်နဲ့ မလွတ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ခန့်က စည်သာယာရွာကို ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ တောင်သူတွေဟာ အဲဒီ လယ်ယာမြေတွေကို တပ်မတော်ကတဆင့်သာ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီနေ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ ဒေါ်တင်အုန်းက ကူညီနိုင်တဲ့သူတွေ သိစေချင်လို့ အခုလို ဆန္ဒပြရတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ ဒီမှာလာလုပ်စားတယ်။ ပထမက နှုန်းတစ်ခုပေးလုပ်စားတယ်။ နောက်ကျတော့ နှုန်းလည်းမပေးနဲ့တော့ဆိုပြီး မောင်းထုတ်လိုက်တာပဲ၊ အဲဒါသိမ်းလိုက်တာပဲ၊ သိမ်းလိုက်တဲပုံစံပဲ။ နိုင်ငံတော်ကနေ တံဆိပ်တွေဘာတွေနဲ့ သိမ်းတာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ အရာရှိတွေကနေခေါ်ပြီးတော့ မြို့နယ်ရုံးတွေကနေ သိမ်းတာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ မြို့နယ်ရုံးက သိတောင်သိလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး"
အရင် အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက အဲဒီမြေတွေ ပြန်ရဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေဖို့ မျှော်လင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာ မန္တလေး ဘီယာစက်ရုံကို တပ်မတော်က ငှားရမ်းလိုက်တာလို့ ဒီနေ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ မြေ ၇ ဧက ပိုင်ဆိုင်သူ ဦးစိန်မောင်က ပြောပါတယ်။
"လယ်မလုပ်ရတော့ အဆင်မပြေဘူး၊ အစိုးရ ၂ ဆက်ရှိပြီ၊ စာတွေတော့ပြန်တယ်။ အကြောင်းထူးမှာပါပေါ့။ အဆင်ပြေမယ့်ကြားထဲကနေ အခုလုပ်တဲ့ကုမ္မဏီကနေ ဝင်ပြီးတော့ ဝင်းတွေခတ်သွားတယ်။ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေတော့ ဒီလယ်တွေကိုပြန်စိုက်ချင်တာ၊ ကန်စွန်းရွက်စိုက်ရ စိုက်ရ လုပ်ကိုင်စားချင်ပါတယ်"
အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အဲဒီမြေနေရာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"ရေခွန်၊ မြေခွန်ဆောင်တယ်ဆိုတာ ၁၉၈၂-၈၃ ကနေပြီးတော့ ၂၀၀၃ နဲ့ ၂၀၀၄ လောက်ထိ ဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားရှိတာက တပ်မတော်က ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားရှိပြီးသား၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ ဒီဟာကို ကန်တော်မင်မြေဆိုပြီးတော့ အဲဒီခေတ်တုန်းက အတွင်းဝန်က အပြတ်ပေးပြီးသား၊ အမည်ပေါက်က ကျနော်တို့က ပိုင်ပြီးသား၊ သူတို့က ၈၂ - ၈၃ ကနေမှ မြေခွန်၊ ရေခွန်ဆောင်တာ၊ အခုခေတ် မြေဈေးနှုန်းတွေ တက်လာတဲ့အချိန်ကျမှ အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာမျှော်မှန်းရင်လည်း မျှော်မှန်းမှာပေါ့၊ အနေအထားကတော့ အဲဒီလို"
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒေသခံတောင်သူတွေက သမ္မတနဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို စာရေးသား ပေးပို့ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Every where and every inch in Myanmar, such conflicts are happening - why? why ? why ?
Apr 08, 2019 01:19 AM